Usoro nyocha na Enterprise Chamber | Law & More B.V.
blog » Usoro nyocha na Chamber Enterprise
Usoro nyocha na Chamber Enterprise
Ọ bụrụ na esemokwu bilitere n'etiti ụlọ ọrụ gị nke enweghị ike idozi n'ime ya, usoro tupu ụlọ ọrụ Enterprise nwere ike ịbụ ụzọ kwesịrị ekwesị iji dozie ha. A na-akpọ usoro dị otú a usoro nyocha. N'ime usoro a, a gwara ụlọ ọrụ Enterprise ka ị nyochaa iwu na usoro ihe omume n'etiti ụlọ ọrụ iwu. Isiokwu a ga-atụle nkenke usoro nyocha yana ihe ị nwere ike ịtụ anya na ya.
Missbanye na usoro nyocha
Enweghi ike ịme nyocha nyocha site na onye obula. Mmasị onye na-arịọ arịrịọ ga-ezuru iji kwado usoro ịnweta ajụjụ yana yabụ itinye aka na ụlọ ọrụ a. Ọ bụ ya mere ndị ahụ ikike iji mee ihe ndị a chọrọ ka edepụtara kpamkpam na iwu:
Ndị na - ekenye ya na ndị ji asambodo NV. na BV Iwu ahụ dị iche n'etiti NV na BV nwere isi obodo kachasị of 22.5 ma ọ bụ karịa. Na nke mbu ndị nwe ya na ndị nwere asambodo nwere 10% nke isi obodo enyere. N'ihe banyere NV na BV nwere nnukwu ego enyere, ọnụ ụzọ nke 1% nke isi obodo enyere ga-etinye, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na mbak na nkwụnye ego maka mbak kwetara na ahịa a na-achịkwa, ọnụahịa kacha nta nke € 20 nde. A pụkwara ịtọ ntọala dị ala n'usoro mkpakọrịta.
The ụlọ ọrụ iwu kwadoro n'onwe ya, site na bọọdụ nchịkwa ma ọ bụ bọọdụ nlekọta, ma ọ bụ onye na-elekọta akwụkwọ enweghị ego nke ụlọ ọrụ iwu kwadoro.
Ndị otu mkpakọrịta, ndị na-ekwenye ekwenye ma ọ bụ ndị otu ọ bụrụ na ha na-anọchite opekata mpe 10% nke ndị otu ma ọ bụ ndị nwere ikike ịtụ vootu na ọgbakọ izugbe. Nke a dabere na ihe ruru mmadụ 300.
Mkpakọrịta nke ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na ndị otu mkpakọrịta na-arụ ọrụ ahụ na mkpakọrịta ahụ nwere ikike iwu zuru oke maka opekata mpe afọ abụọ.
Ikike ma ọ bụ ikike iwu kwadoro. Iji maa atụ, kansụl na-arụ ọrụ.
Ọ dị mkpa na onye nwere ikike ịmebe nyocha ebula ụzọ mee mkpesa ya gbasara amụma ahụ yana usoro a na-eme n'ime ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ njikwa na ndị nlekọta na-ahụ maka ya. Ọ bụrụ na emebeghị nke a, Ngalaba Enterprise agaghị atụle arịrịọ maka ajụjụ. Ndị ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị ohere ịzaghachi mmegide ahụ tupu usoro ahụ amalite.
Usoro: usoro abụọ
Usoro a na-amalite site na ntinye nke arịrịọ na ohere maka ndị otu a metụtara ụlọ ọrụ (dịka ndị nwe obodo na ndị njikwa) iji zaghachi ya. Chamberlọ ọrụ Enterlọ Ọrụ ahụ ga-enye arịrịọ ahụ ma ọ bụrụ na emezuru ihe iwu chọrọ ma ọ dị ka ọ nwere 'ezi uche dị na ya iji nwee obi abụọ banyere iwu ziri ezi'. Mgbe nke a gasịrị, usoro abụọ nke usoro ịjụ ajụjụ ga-amalite. Na nke mbụ, a na-enyocha iwu na ihe omume n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ otu onye ma ọ bụ karịa ndị Divisionlọ Ọrụ Enterprise họpụtara na-eme nchọpụta a. Companylọ ọrụ ahụ, ndị otu njikwa ya, ndị otu nlekọta na ndị ọrụ (mbụ) ga-arụkọ ọrụ ma nye ohere maka gọọmentị niile. Ọnụ ego nke nyocha ahụ ga-ebu isi ụlọ ọrụ (ma ọ bụ onye na-arịọ arịrịọ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ enweghị ike iburu ha). Dabere na nsonaazụ nke nyocha ahụ, enwere ike ịnweta ego ndị a n'aka onye na-achọ akwụkwọ ma ọ bụ ndị njikwa. Na ndabere nke akụkọ nke nyocha ahụ, Ngalaba priselọ Ọrụ ahụ nwere ike ịmalite na nke abụọ na e nwere nrụrụ aka. N'okwu ahụ, Ngalaba Enterprise nwere ike ịme ọtụtụ ihe.
N'oge usoro ahụ na (ọbụlagodi tupu usoro nyocha mbụ nke usoro ahụ amalitela) priselọ ọrụ Enterprise nwere ike, na arịrịọ nke onye nwere ikike ịjụ ajụjụ, mee ndokwa nke oge. N'akụkụ a, ụlọ ọrụ Enterprise nwere nnwere onwe dị ukwuu, ọ bụrụhaala na ndokwa ahụ ziri ezi site na ọnọdụ nke ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ na mmasị nke nyocha ahụ. Ọ bụrụ na eguzobe iwu na-adịghị mma, ụlọ ọrụ Enterprise nwekwara ike ịme usoro siri ike. Ndị a ka iwu kwadoro ma nwee oke na:
nkwusioru ma ọ bụ nwepu mkpebi nke ndị isi njikwa, ndị isi nlekọta, nzukọ izugbe ma ọ bụ otu ọ bụla ọzọ nke ụlọ ọrụ iwu;
nkwusioru ma obu iwepu otu ma obu ndi isi ndi nlekota;
nhọpụta nwa oge nke otu ma ọ bụ karịa ndị isi njikwa ma ọ bụ ndị nlekọta;
mgbanwe nke nwa oge site na ndokwa nke usoro njikọ dịka ụlọ ọrụ Enterprise gosipụtara;
mbufe oge nke mbak site na njikwa;
mgbasa nke onye iwu.
Naanị mkpesa na cassation nwere ike ịgba akwụkwọ megide mkpebi nke ụlọ ọrụ Enterprise. Ikike nke ime nke a bụ nke ndị pụtaworo n'ihu Ngalaba priselọ Ọrụ na usoro, yana ya na ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị. Oge maka cassation bụ ọnwa atọ. Cassation anaghị enwe mmetụta mmetụta. N'ihi ya, iwu nke Ngalaba priselọ Ọrụ ahụ na-adịgide ruo mgbe thelọikpe Kasị Elu kpebiri mkpebi megidere nke ahụ. Nke a nwere ike ịpụta na mkpebi nke Courtlọikpe Kasị Elu nwere ike ịbụ oge na-adịghị anya n'ihi na Ngalaba Enterlọ Ọrụ etinyelarị ndokwa. Agbanyeghị, cassation nwere ike ịba uru n'ihe metụtara ọrụ nke ndị isi na ndị isi na ndị nlekọta na-ahụ maka nrụrụ aka nke ngalaba Enterprise.
Na-edozi esemokwu na ụlọ ọrụ ma ị na-eche maka ịmalite usoro nyocha? Na Law & More ndi otu nwere otutu ihe omuma banyere iwu ulo oru. Mụ na gị anyị nwere ike nyochaa ọnọdụ na ohere. Na ndabere nke nyocha a, anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ na usoro ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. Anyị ga-enwekwa obi ụtọ ịnye gị ndụmọdụ na enyemaka n'oge ọ bụla (na Enterprise Division).
Previous Post Achụpụ n'oge oge probation
Next Post Alimony